नेकपाले रवीन्द्र मिश्र वा कांग्रेसीलाई सांसद बनाउने भाे ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
नेकपाले रवीन्द्र मिश्र वा कांग्रेसीलाई सांसद बनाउने भाे !
२०७५ असोज २३ मंगलवार
काठमाडाै, २३ असोज । काठमाडाै–७बाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका वामदेव गौतमलाई मतदाताले नै भोट नहाल्ने घोषणा गरेका छन् । डोल्पाबाट सहयाेग नपाएका गौतमलाई काठमाण्डुका मतदाताले पनि सहयोग नगर्ने भएका हुन् । काठमाण्डु–७ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाएर गौतमलाई उठाउने निर्णय नेकपाले गरिसकेको छ । मानन्धरले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गौतमको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । तर उनले गौतमलाई छोड्न ३ वटा सर्त अघि सारेको बताइएको छ । सांसद मानन्धरले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोमबार नै राजीनामा पत्र बुझाएका छन् ।
उनले राखेका तीन मागमा– आफुलाई नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय सभाको सदस्य र मन्त्री बनाउनुपर्ने छन् । प्रचण्ड र गौतमले आफ्ना शर्त पूरा हुने आश्वासन दिएपछि गौतमलाई काठमाण्डु–७ छाड्न आफू तयार भएर राजीनामा पत्र पार्टी समक्ष बुझाएको मानन्धरले बताएका छन् । काठमाण्डुका मतदाताले गौतमलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।
मानन्धरका एक जना समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ भनाइ छ: ‘लोकतन्त्रमा सबै बराबर हुन्छन्, तर केही मान्छे अलि बढी नै बराबर हुन्छन् ।’ त्यसैको पुष्टि हो कि बामदेव गौतमका लागि रामबिर मानन्धरलाई ‘सहिद’ बनाउने हल्ला !! यदि हल्ला सांचो हो भने यो भन्दा नकाम अरु हुने छैन । बामदेव जत्तिको अनुभवी नेताले यस्तो कच्चा खेल खेल्नु होला भनी पत्याउन गाह्रो छ !!! जनता कसैका बंधुवा होइनन् भन्ने सत्य आत्मसात गर्नुपर्यो नेताहरुले । नत्र के को नेता ? जनप्रतिनिधिको पद कुनै जमिन्दारी होइन जसलाई मालिकले चाहेको बेला हस्तान्तरण गर्न सकोस् !! कदाचित यो नौटंकीपूर्ण निर्णय भयो भने त्यो स्वयं बामदेव गौतम र रामबिर मानन्धरलाई मात्र होइन संबन्धित पार्टी र लोकतन्त्रकै निम्ति घातक हुनेछ । र त्यस्तो कामको समर्थन बिल्कुल गर्न सकिन्न ! ’
त्यस्तै अर्का दीपक धिताल लेख्छन्, ‘RamBir Manandhar ले छोडेपछि बामदेवले पाउँदैनन्, नेकपाले रवीन्द्र मिश्र वा काग्रेसीलाई सासंद बनाउने भयो । जनमतको कदर गर्न नजान्ने नेतालाई जनताले सजाय दिनैपर्छ । जनता रैती हैनन्, नागरिक हुन भन्ने सोच किन पलाउँदैन नेकपाका नेताहरुमा ? नेकपा फुटाउने कोरम पुर्याउनको लागि सांसद बन्न लागेका त हैनन गौतम ? आशा छ, कुनै एक ब्यक्तिको सांसद बन्ने उग्र चाहनालाई काठमाडौं ७ का जनताले मतदान गर्ने छैनन र सोध्नेछन पहिला मत दिएका मानन्धर किन अयोग्य भए ? लोभलालच र पदमा फस्ने रामबीर जी पनि दोषी हो ।’
यसअघि डोल्पाबाट चुनाव लड्ने चर्चा चलेपनि गौतमलाई डोल्पाली युवाले कुनै पनि हालतमा चुनाव नजिताउने बताएपछि उनी ‘ब्याक’ भएका हुन् । डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन लगाएर नेकपाले गौतमलाई सांसद बनाउने तयारी गरेपछि गौतमको चर्को विरोध भएको हो । डोल्पाबाट चुनाव हार्ने देखेपछि गौतमले पार्टीको शीर्ष नेताहरुसँग छलफललाई तिव्रता दिएका थिए ।